Ngaba buhlungu ukuba iminyaka yokuhamba indiza, siyashintsha, kwaye oku kukuchaphazela kakhulu imbonakalo yethu. Yingakho i-cosmetologist ehamba phambili kunye noogqirha kwihlabathi lonke bezama ukufumana iindlela ezintle zokugcina ukutshabalalisa nokuqina kwesikhumba eside, ukunyanzela ulutsha kunye nentlalo. Kwaye ngoku ikhanda elihle, elibukhali lobuso kunoma yiyiphi iminyaka ayilona ngongoma. Kubalulekile kuphela ukufuna ...
Ukusondela kwiminyaka engama-30, abaninzi abafazi baqala ukuqaphela ukuba imibuso yokuqala ibonakala ngamehlo, kufuphi nomlomo nasebunzini. Oku kungenxa yokuba zombini i-collagen kunye ne-elastin, eziyinxalenye yesikhumba sethu, ziqala ukuphuka kancane. Isikhumba esikhathekayo phantsi kwamehlo sincinci. Kwaye kubaluleke kakhulu - ulusu luba lukhuni. Oku kubonakala ngokugqithiseleyo emva kwebusika ebanda nepholile, kunye nokuhlala ixesha elide kwigumbi elinesimo somoya. Yaye ukuba ungekho umoya omtsha kunye nokuphumla, oku akubonakali ukubonakala kwakho. Ukongezelela, ejwayele ukuba yinkwenkwezi, isimo sezulu esinesibhakabhaka, isikhumba sombuso singabandezeleka kakhulu kwimisebe ye-ultraviolet.
Ngoko ke, nabasetyhini bafanele ba khumbule: isikhumba sabo somzimba ngokuqinisekileyo sidinga ukunyusa - ekuseni nakusihlwa. I-hydration efunekayo ngokukhethekileyo xa kubomile kwesikhumba kudla kukukhathaza okanye uvakalelwa njalo. Futhi usebenzise ukhilimu ophuculweyo kufuneka ube nokuhamba okulula, okubhekise phezulu, okuya kukunika umphumo wokubamba lula. Esikhundleni sokuhlamba, sula ulusu ngokucoceka ubisi kunye nezilwanyana ezingenalo utswala. Kodwa ukuba unesidingo sokuhlamba ubuso bakho ngamanzi ekuseni, ungasebenzisi isepha, kodwa kuphela kwiigels ezikhethiweyo okanye iifumba ezikhusela isikhumba sakho.
Xa uneminyaka engama-40, ukubonakalisa kwisibuko kubonisa ukuba imibimbi iyanzulu. Oku kwenzeka ngenxa yokuba ulusu luba lukhulu kakhulu. Yaye nangona kusekhona indlela ende yokuya kwimihla, ukulungiswa kwe-hormone ye-hormonal ye-female body begins. Kwaye, oku, kuchaphazela imeko yesikhumba: kuya kuba yimbi kwaye ilula. Kwaye nangona uhlala ukhangele ubuso bakho, ubuzwe besikhumba sakho bunyuke ngokufanayo.
Ukuze ungacasuli isikhumba ngexesha lokucoca, gwema ukusebenzisa i-tonics e-alcohol. Ukutya okufanelekileyo kubaluleke kakhulu. Ukuhluma ukolweni kunye namantongomane, ioli yeoli kunye neentlanzi ezinamanci ziqukethe iivithamini kunye nezinto ezilandeleleneyo ezigcina ukutsha kunye nokuqina kwesikhumba. Yidla imifuno nemifuno entsha, kwaye uphuze ubuncinane 1.5 ilitha amanzi ngosuku. Yaye isikhumba sombuso esihle siya kuhlala singagxinwa.
Ukuba ufuna ukubuyisela isikhumba esiluhlaza kunye ne-elasticity, ukuba ufuna ukukunceda ngokukhawuleza ukumelana nokuguquguquka kwama-hormonal, ke awukwazi ukwenza ngaphandle kokunyusa okongezelelweyo kunye nokunondla ulusu lobuso. Kwaye kulo mzekelo, uya kuba neentsholongwane ezinomsoco. Kuwusizo ukuwasebenzisa ekuseni nakusasa, kwaye inani elikhulu lekhilimu kufuneka lisetyenziswe kwizihlathini nasebunzini.
Emva kweminyaka engama-50, ingxaki ebalulekileyo yesikhumba ebusweni kukunyuka kwayo. Kule ndlela, ifomathi emitsha yombumba, kunye nabadala bayabonakala ngakumbi. Ithenda yesikhumba ibuthakathaka, ibonakala ibonakala. Kodwa akukaze kukhawuleze ukuba uqale ukuzikhathalela. Ukubuyisela imeko enhle yesikhumba kunokwenzeka ngoncedo lokunyusa okunyanzelekileyo. Kubalulekile kuphela, ukuba uqalise iinkqubo zokutya, musa ukuziyeka.
Musa ukuwayeka ukungena kwamavithamini A, C no-E. Baya kunceda ulusu lwakho lujamelane nemiphumo emibi yendalo. Ukunyamekela ukubonakala kwakho, ugweme ukutshaya, kuba umsi wocuba uguqula isikhumba. Kodwa ukuhamba kuzalisa umzimba nge-oksijeni, "evuselela" isikhumba esikhatheleyo ebusika.
Ngaliphi na ubudala
Kodwa kungekhona nje kuphela ukuba iminyaka ichaphazela imeko yesikhumba sethu. Usuku olusebenzayo olungagunyazisiweyo kunye nokunyanzeliswa kwimihla ngemihla, ukungondleki kakuhle, ukungabikho komzimba, ukuqhagamshelana rhoqo kunye neekhemikhali zendlu - konke oku kwenzayo. Kwaye malunga nelo bhinqa abathi bayabonakala bekhathele okanye, ngakumbi nakakhulu, abadala. Yingakho isikhumba sakho sidinga ukunakekelwa nokukhuselwa, kungakhathaliseki ukuba uhlola njani imeko yayo. Uhlala efuna umswakama wokuphila, ukutya okunomsoco, kunye namaxesha athile unyango oluxhasayo. Yaye musa ukuvila! Emva koko, akukho nto enhle ngaphezu kwesibhakabhaka esihle, esicwebileyo ebusweni kwaye ujabule, ukhanyayo amehlo omnini wayo.
Masks ngobuso ngekhilimu omuncu
Indlela yokukhetha iingubo zasebusika zomntwana wakho
Ukupheka kwindleko zokugcoba ekhaya: iiprotheyini kunye ne-cocktail eluhlaza kwi-blender
Kutheni umtshato utshintsha?
Isaladi yaseMedithera ngepilisi